latest news Archives – Page 8 of9– Tamu Dhee UK
लण्डन मिचेट । नेपाली समुदायमाझ बेलायतमा निकै लोकप्रिय रहेको गोर्खा कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो कुराको जानकारी आयोजक संस्था तमुधिं यूकेका खेलकुद सचिव क्याप्टेन पितम्बर गुरुङले गराएका हुन् । उनले आइतबार १७ अप्रिलमा तमुधिं भवन…
लण्डन एटा सम्वाददाता - केन्ट । तमुधिं यूकेको केन्ट ईकाईको चौंथो अधिवेशनले क्या.रि. सूर्यप्रकाश गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । गत शनिबार १६ अप्रिल २०१६ का दिन लेमन लिफ रेष्टुरेण्टमा सम्पन्न संस्थाको अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो…
लण्डन मिचेट । तमुधिं यूकेले आउने २९ मे आइतबारका दिन अल्डरसटस्थित क्वीन्स एभिन्यू खेल मैदानमा आयोजना गर्न लागेको १४औं गोर्खा कपको तयारी पुरा भएको बताएको छ । सो कुरा गत आइतबार २२ मे का दिन तमुधिंद्वारा तमूधिं भवन मिचेटमा आयोजित…
लण्डन गत आइतबार सम्पन्न १४ औं गोर्खा कपको नन भेट्रानतर्फ क्यूजिएस् सिग्नल्स् रातोले जितेको छ । क्वीन्स् एभिन्यू फुटबल मैदान, अल्डरसटमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा बी १३ लाई १ को विरुद्ध २ गोल हानी क्यूजिएस् सिग्नल्स् रेडले पहिलो उपाधि जितेको हो…
लण्डन ज्ञाम गुरुङ मिचेट । गत आइतबार तमुधिं भवन मिचेटमा आगामी अगष्ट २८ तारीखमा सम्पन्न हुन लागेको आठौं नेपाली मेलाको तयारी बैठक सम्पन्न भएको छ । तमुधिं यूकेका अध्यक्ष सुर्जे (रामचन्द्र) गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मेलाका संयोजक एवं उपाध्यक्ष नन्दजङ्ग…
लण्डन अल्डरसट । तमुधिं यूकेद्वारा नेपालका सांसद डा. गणेशमान गुरुङको स्वागत तथा सम्मान गरेको छ । उनलाई गत शनिबार अल्डरसटस्थित रोयल कोरिया रेष्टुरेण्टमा स्वागत तथा सम्मान गरेको हो । सो अवसरमा उनीस“गै रहेका उनको श्रीमति सरस्वत गुरुङलाई समेत खादा लगाई…
लण्डन क्याम्पटन पार्क । हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरवको नाराका साथ आठौं नेपाली मेला विविध कार्यक्रम सहित सम्पन्न भएको छ । गत आइतबार २८ अगष्ट २०१६ का दिन लण्डनस्थित क्यँम्पटन पार्क, रेसकोर्षमा सम्पन्न भएको नेपाली मेलाको एम्बेस्डर कप लमजुङ…
तमुधीं यू के ले गत आइतवार २५ तारिखमा तमुहरुका मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालका सपूत द्वय स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङ र डा. चन्द्र गुरुङलाइ वहाँहरुले इहलिला समाप्त गर्नु भएको दशौँ वर्षगांठको अवशरमा भावपूर्ण श्रद्दान्जली दिंदै सम्झना गरयो l तमु नेपलिज कम्युनिटी…
लण्डन तमुधिं यूकेले गत शनिबार लाईफ मेम्बर डिनर नाईट कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा आयोजित कार्यक्रममा तमुधिं यूकेका आजीवन सदस्यहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा तमुधिं यूकेको हरेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या‍उँदै आएका प्लमस्टिडका मोहन गुरुङ, रेडिङका…
अल्डरसट । तमुधिं यूकेले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको एक कार्यक्रमबीच स्वागत गरेको छ । सन् २०१४ देखि राजदूतविहिन रहेको नेपाली दूतावास बेलायतका लागि हालै नेपाल सरकारबाट नियुक्त भई एक महिनाअघि उनी बेलायत आएका हुन् । उनलाई तमुधिं…